Web Professional Foundation
Web Professional Advanced
သင့်ရဲ့ ကလေးကို ကွန်ပျူတာနဲ့ ဘယ်အရွယ်မှာ မိတ်ဆက်ပေးတာ မှားတယ်၊ ဘယ်အရွယ်မှာ မိတ်ဆက်ပေးတာ မှန်တ...
PHP မှာ Magic Method ဆိုတာ အခြေအနေတစ်ခုအပေါ်မှာ မူတည်ပြီး လုပ်ဆောင်တဲ့ Method တွေကို ခေါ်ပါတယ...
I have3graduates of Myanmar Links. All3individuals have solid programming foundation as well as the ability to break down complex problems into smaller ones and tackle individually quickly. In addition, they have the ability to study, analyze and crack new challenges without much supervision.
Ye Myat Min Founder & CEO
Myanmar Links နဲ့ပတ်သက်ရင် အမှတ်ရစရာတွေ အများကြီးပဲ။ ဘာလို့ဆို Foundation တန်းရော Professional တန်းရော ပထမဆုံးအတန်းတွေမှာ တက်ခဲ့ရတာကိုး။ အခန်းကျဥ်းလေးထဲမှာ နေ့လည်ဆိုပူလွန်းလို့ စာသင်ခန်းထဲ မသင်နိုင်ဘဲ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ စကားတွေပြောရင်း သင်ယူခဲ့တာတွေရော။ သင်တန်းမှာ အခြေခံကိုသင်ပေးပြီး ဘယ်လို ဆက်လေ့လာရလဲ သင်ပေးလိုက်တာတွေကလဲ အသစ်တွေအမြဲထွက်တဲ့ ဒီလောကထဲ အဆင်ပြေပြေ ဆက်လက်လေ့လာနေဖို့ အရမ်းကို အထောက်အကူပြုခဲ့တယ်။ တကယ်လို့ Myanmar Links ကိုမရောက်ခဲ့ရင် Web Development လောကထဲ ရှိနေမယ် မထင်ပါ။
Nyan Lynn Htut Senior Engineer
Myanmar Links မှာ တက်ခဲ့တုန်းက ကျွန်တော်သဘောကျ နှစ်သက်မိတဲ့ အချက်တွေ အများကြီး ရှိတဲ့အထဲမှာ အဓိက သုံးချက်ကို ပြောရမယ်ဆိုရင်
(၁) သင်ရတဲ့စာက အရမ်းခေတ်မှီတယ်။ သင်တန်းမှာ သုံးတာနဲ့ အပြင်လုပ်ငန်းမှာ သုံးတာပြတ်ကျန်နေတာမျိုး မရှိဘူး။
(၂) Development Environment တည်ဆောက် အသုံးပြုမှုကို သေသေချာချာ စနစ်တကျ ဦးစားပေးသင်ကြားပေးတယ်။
(၃) ဆရာနဲ့တပည့် တသားတည်းအတူ Pair Programming ဆန်ဆန် သင်ကြားပေးတာမျိုး ကြောင့် Thinking Concept ပိုင်းဆိုင်ရာ အလေ့အထကောင်းတွေကို မွေးယူးပေးသလို ဖြစ်စေပါတယ်။
ကျွန်တော် အနေနဲ့ ဒီအချက်တွေက သင်တန်းပြီးပြီးချင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ဖို့ ဖြစ်စေ၊ ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်းတစ်ခု တည်ထောင်ရင် ဖြစ်စေ အထောက်အကူအများကြီး ဖြစ်ပါတယ်။
Naing Lin Aung Software Engineer
မှတ်မှတ်ရရ Myanmar Links မှာ Foundation အတန်းတက်တုန်းက ဆရာ့အနေနဲ့ UI နဲ့ UX ပိုင်းတွေအကြောင်း ပြောပြရင်း၊ Apple Website နဲ့ Samsung Website နှစ်ခုကို ယှဥ်ဖွင့်ပြပြီး Design ပိုင်းအားနည်းချက်၊ အားသာချက်တွေသာမက၊ Marketing Strategy တွေကိုပါ နှိုင်းယှဥ်ပြခဲ့တာကို သတိရမိပါတယ်။ Individual Project တွေ၊ Group Project တွေလုပ်ခဲ့ရတာကြောင့်လည်း Self-Study ပိုင်းနဲ့ Brainstorming ပိုင်းတွေ ပိုကောင်းလာခဲ့တယ်။ ဒီအချက်တွေအားလုံးဟာ မိမိကိုယ်တိုင် Web Designer & Front-End Developer တစ်ယောက်အနေနဲ့ လုပ်ငန်းဝင်ချိန်မှာ အဘက်ဘက်က အဆင့်သင့်ဖြစ်စေဖို့ အထောက်အကူ ပေးခဲ့ပါတယ်။
Min Khant Ye' Naung Senior Web Designer & Front-End Developer
Myanmar Links ကိုရောက်တော့ Programming အခြေခံလောက်ပဲသိခဲ့တာ။ အလုပ်တစ်ခုဝင်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် အဓိက ရည်ရွယ်ခဲ့တဲ့အတွက် Project တွေရေးသွားရင်း သင်တဲ့ပုံစံကကျွန်တော့်အတွက် အရမ်းကို အထောက်အကူပြုခဲ့ပါတယ်။ Foundation နဲ့ Advance တန်း (၉) လလောက်အတွင်း ဆရာနဲ့အတူ စဥ်းစားခဲ့တာတွေ၊ Error တွေရှင်းခဲ့ရတာတွေအပြင် Self-Study လုပ်တဲ့ အကျင့်တစ်ခု ကောင်ကောင်ရခဲ့တာက တကယ့်လုပ်ငန်းခွင် စဝင်တဲ့အချိန်မှာ အရမ်းကိုအကျိုးရှိခဲ့ပါတယ်။
Naing Win Software Engineer
ကျွန်တော် Android သင်တန်းစဖွင့်ပြီဆိုတာ သိသိချင်း ဆရာဆီမှာ စာရင်း အရင်ဆုံးသွင်းခဲ့တာပါ။ အရင်ကဆို Program တစ်ခုရေးရင် Error တက်လာရင် ရေကြီးခဲ့တာအမှန်ပါ(ဒုက္ခရောက်)။ သင်တန်းတက်ပြီးတည်းက စပြီး Problem Solving Skill တိုးတက်လာပါတယ်။ Self Study ဖြစ်အောင်လည်း လေ့ကျင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ Product တစ်ခုကို Production Level အထိ ရောက်အောင် လေ့ကျင့်ပေးတဲ့အတွက် အခုဆို အဆင်ပြေနေပါပြီ။ ဒါ့အပြင် ပရဟိတ နည်းပညာကိုပါ သင်ကြားပေးတဲ့အတွက် အတွေ့အကြုံတွေ အများကြီးရခဲ့ပါတယ်။
Win Phyoe Thu Android #1 - Team Pyin Pay Par (Yangon Bus Report)
Myanmar Links မှာ Foundation နှင့် Advanced တန်းတွေ တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ အခြေခံကစပြီးတော့ သဘောတရားကို နားလည်အောင် သေချာရှင်းပြပေးပါတယ်။ Conding ရေးတဲ့အခါမှာလည်း ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ Error တွေကို လက်တွေ့လုပ်ပြပြီး ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်။ ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာကို နားလည်တဲ့အထိ တွဲခေါ်သင်ကြားပေးပါတယ်။ Myanmar Links မှာသာ သင်တန်းမတက်ဖြစ်ခဲ့ရင် အခုအချိန်မှာ Developer တစ်ယောက်အဖြစ်ရပ်တည်ဖြစ်မယ် မထင်ပါဘူး။
Phyu Thinn Aung Senior Web Developer
Myanmar Links ဆိုတာတဲ့ ခေါင်းထဲပြေးဝင်လာတာက ပရဟိတနဲ့နည်းပညာပါပဲ။ အရင်က နည်းပညာချည်းသက်သက်နဲ့ နေထိုင် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနေပေမယ့် Myanmar Links မှာ သင်တန်းတက်လိုက်ချိန်မှာတော့ နည်းပညာနဲ့ ပရဟိတဆိုတာ တွဲလျက်သွားလို့ ရပါလားဆိုတာ သိလိုက်ရပါတယ်။
ပြီးပြီးရော Certificate ပေးလိုက်တဲ့ သင်တန်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ Application တစ်ခုတည်ဆောက်ရာမှာလိုအပ်တဲ့ Concept တွေ၊ Coding Skill တွေနဲ့ ကြုံတွေ့လာနိုင်တဲ့ Problem တွေကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ စတာတွေကို လက်တွေ့ကျကျသင်ပေးတဲ့ သင်တန်းမျိုးပါ။
သင်တန်းပြီးချိန်မှာတော့ နည်းပညာသမားတွေအတွက် လိုအပ်တဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရည်အချင်းတွေအပြင် တကယ်လုပ်သင့်တဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရည်အချင်းတွေကိုပါ တစ်ခါတည်းရလိုက်ပါတယ်။ Application Development ကို ရူးသွပ်တဲ့လူမျိုးတွေမဖြစ်မနေတက်သင့်တဲ့ အတန်းတွေပါပဲ။ သင်တန်းချိန်မှန်ပြီး ဆရာပြောတဲ့အတိုင်း လုပ်မယ်ဆို Development ပိုင်းမှာ Professional ကျကျ နေရာတစ်ခုရလာမယ်ဆိုတာ 100% သေချာပါတယ်။
Ye Wint Htat Senior Web Developer
Myanmar Links က ကျွန်တော်ရဲ့ပထဆုံးနဲ့ နောက်ဆုံးတတ်ခဲ့တဲ့ နည်းပညာသင်တန်းပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Code ကို ဘယ်လိုရေးရတယ်ဆိုတာကို သင်ပေးရုံတင်မဟုတ်ပဲ ဘယ်လိုလေ့လာရတယ်ဆိုတာပါ သင်ပေးလိုက်တဲ့အတွက် နောက်ပိုင်း အသစ်ဆိုတာကို မကြောက်တော့ဘူး။ သင်တန်းပြီးသွားတဲ့အခါ ကိုယ်ဘာသာလေ့လာနိုင်သွားတယ်။ သင်တန်းပြီးခါနီး ကိုယ်ပိုင် Project, Group Project တွေကို သေချာလုပ်ခဲ့ရတဲ့အတွက် တကယ်တမ်း အလုပ်ဝင်တဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိလာတယ်။ Technical Skill ပိုင်းကိုသာ သင်ပေးတာမဟုတ်ပဲ အရေးကြီးတဲ့ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီးလေ့လာတတ်တဲ့ Mindset ကိုပါထည့်ပေးလိုက်လို့ Web Developer တစ်ယောက်ကနေ Mobile Developer တစ်ယောက်အဖြစ်ပြောင်းတဲ့အခါ သက်တောင့်သက်သာနဲ့ အခက်အခဲနည်းခဲ့တာပါ။
Arkar Aung Senior Android Engineer
Myanmar Links မတက်ခင်အချိန်ကဆို တွေးရမှာ တော်တော်ကြောက်တယ်ဗျ။ နောက်ပြီ အသစ်လေ့လာရမယ်ဆို မလုပ်ရဲတော့ဘူး ကုဒ်ရေးရင်လဲ ပုံစံခွက်ထဲက ခွဲထွက်ပြီး ကိုယ်ပိုင် Thinking နဲ့မရေးတက်ခဲ့ဘူး။ ငယ်ကတည်းက ဒါကျက်ဒါဖြေစနစ်နဲ့ ရင်းနှီးခဲ့တာ နောက်ပြီးတော့ နယ်ကလာတာ ဆိုတော့ ကျနော့်ရဲ့ Programmer Life အစောပိုင်းက တကယ့်ကိုခက်ခဲစွာရုံးကန်ခဲ့ရတာပါ။
အဲ့ဒီမှာ ဆရာနဲ့တွေ့တာ ကျနော့်အတွက် တကယ့်ကိုကံကောင်းခဲ့ပါတယ်။ သင်တန်းမှာ Programing အတွက် လိုအပ်တာတွေသင်ပေးရုံမက Development Concept တွေ, Confident ရှိရှိ ကုဒ်ရေးတတ်ဖို့တွေ, Error တွေ့ရင် ခေါင်းအေးအေးထားပြီး ဖြေရှင်းတတ်ဖို့ တွေပါသင်ပေးတဲ့အတွက် နောက်ပိုင်းအလုပ်ဝင်တဲ့အခါ တကယ်ကို အကျိုးရှိခဲ့ပါတယ်။
အများကြီးတော့မပြောပြတတ်ဘူး။ Myanmar Links နဲ့သာမတွေ့ဖြစ်ခဲ့ရင် ကျနော်လဲ အခုကုဒ်ရေးနေတဲ့ ပြည့်စုံငြိမ်းဖြစ်မလာဘူး ဆိုတာပါဘဲ။ အဲ့ဒီလောက်ထိ Myanmar Links က ကျေနော့ရဲ့ Career ကို သက်ရောက်မှု ရှိခဲ့ပါတယ်။
Pyae Sone Nyein Software Developer
နိုင်ငံတော်ပရိယတ္တိသာသနာ့ တက္ကသိုလ် (ရန်ကုန်)